Izindaba - I-Global Premium Stroller kanye ne-Stroller Market ngo-2020-Impact ye-COVID-19, Ukuhlaziywa Kwesikhathi Esizayo Kokukhula Nezinselelo
I-Global Premium Stroller kanye ne-Stroller Market ngo-2020-Impact ye-COVID-19, Ukuhlaziywa Kokukhula Kwesikhathi Esizayo kanye Nezinselelo
I- “2020 Global High-end Stroller and Stroller Market Report Report” ihlaziya isimo semboni namathemba ezifunda ezinkulu ngokuningiliziwe ngokuya ngabadlali ababalulekile, amazwe, izinhlobo zemikhiqizo nezimboni zokuphela. Lo mbiko wocwaningo uhlinzeka ngokuhlaziywa okuphelele kwezingxenye zemakethe, njengamathuba emakethe, imininingwane yokungenisa nokuthekelisa, amandla emakethe, abakhiqizi abakhulu, amazinga okukhula kanye nezifunda ezinkulu. Umbiko wecwaningo lomakethe we-premium stroller kanye ne-stroller uhlanganisa imininingwane enikezwe ngokusho komkhiqizi, isifunda, uhlobo nokusetshenziswa.
Ngokwalo mbiko, imakethe yePrimiyamu Pram neBaby Stroller izokhula ngezinga lokukhula ngonyaka elixakile le-xx% ngesikhathi sesibikezelo (2019-2027), futhi izodlula inani lika-US $ XX ngasekupheleni kuka-2027. Imakethe inikeza amaphrofayli ezinkampani zabadlali abakhulu abalulekile, kufaka phakathi izitayela zentuthuko, imininingwane yendawo yokuncintisana, kanye nesimo sokuthuthukiswa kwesifunda.
Ubhadane lweCovid-19 lube nomthelela omubi emnothweni omningi osethuthukile nasathuthukayo. Lo mbiko uhlanganisa uphenyo lomthelela wemali engenayo, ukuphazamiseka ochungechungeni olujwayelekile kanye neminyango esanda kuvulwa, ukuhlolwa okuphelele kwezimo zebhizinisi, ukubalulwa kweminyango esanda kuvulwa, njll.
Uhlobo Lwehlukaniso Lwe-Global Premium Stroller kanye ne-Stroller Market: Isitrolili Esingashadile, Isinqola Esiningi
Isicelo sehlukaniso semakethe yezinga eliphakeme lomhlaba kanye nesitimela esihamba ngezingane: izinyanga eziyi-9 ngaphansi kwezinyanga eziyi-9 kuye ngaphezulu kwezinyanga ezingama-24 izinyanga ezingama-24